Documentation | eLearning
25th December 2021 By MyanmarDF
business users, management, architect တို့အတွက် အရာရာကို စနစ်တကျ ရေးမှတ်ထားသည့် စံ (standard) သတ်မှတ်ထားသော document တို့သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ requirement document, technical document- high level, low level design, architecture design diagram, qa test cases, change management, deployment process အစရှိသည်တို့ကို သူ့နေရာနှင့်သူ အဆင့်ဆင့် သတ်မှတ်ထားရသည်။ ကျွန်တော်သည် မြန်မာ၊ စင်ကာပူ၊ ဂျပန် နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံတို့တွင် software များ ရေးသားခဲ့ဖူးသည်။ ထိုနိုင်ငံများတွင် ရေးသားသည့် နည်းပညာများအတိုင်း မြန်မာပြည်မှ လူငယ်များလည်း ရေးသားနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ထိုနိုင်ငံများမှ software developer/technical သမားများသည် မြန်မာလူငယ်များထက် ထူးချွန်သာလွန်ပြီး အလွန်အမင်း တော်နေကြသည် မဟုတ်။ စေ့စပ်သေချာသော စနစ်နှင့် စည်းစနစ်ကျသော အုပ်ချုပ်မှု အောက်တွင် ၎င်းတို့သည် အလုပ်လုပ်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ software development နည်းပညာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အခြားနိုင်ငံများနှင့် တန်းတူပင်။ ထို့ကြောင့် outsourcing များ ပင် ရှိလာသည်။ မြန်မာပြည်မှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသုံး software (large enterprise software) များကို နိုင်ငံခြားမှ ကုမ္ပဏီများက ရေးပေးကြသည်ဟု သိရသည့်အခါ အလွန် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိသည်။ မြန်မာ ပြည်မှ software development လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများ နစ်နာရသည်။ သို့ရာတွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များကလည်း မြန်မာ ပြည်မှ software development အပေါ် ယုံကြည်မှု မရှိတာလဲ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းငယ်တွေများပြီး large enterprise software development ကို တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အကြီးစား ကုမ္ပဏီ တွေ နည်းလွန်းလှသည်။ ထိုအားနည်းချက်တို့ကို ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်နိုင်လျင် မြန်မာပြည်အတွက် project အခွင့်အလမ်းများ ပိုမို ရရှိလာနိုင်သည်။ လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှ ကွန်ပျူတာ အသင်းအဖွဲ့များကလဲ ကူညီဆောင်ရွက်ပေး စေချင်သည်။ to enable collectively join force smaller companies to make one giant enterprise, yet each companies can stand still on its own. (allocating sub-contracts, sub chapters, taking responsibility on different phases of project by each company).
ကျွန်တော်သည် လက်ရှိ အမေရိကမှ ပရောဂျက်များကို မြန်မာပြည်မှ လူငယ်များကို ခိုင်းကြည့်သည်။ လုပ်နိုင်ကြသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ software development တွင် အားနည်းသည့် ချက်များရှိသည်။ (နောက်မှ ထိုအားနည်းချက်များကို ရေးအုံးမည်။) မြန်မာ ပြည်ကို outsource လုပ်သည့် အခါ အခက် အခဲ အချို့ ရင်ဆိုင်ရသည်။ မြန်မာပြည်တွင် outsource မလုပ်ပဲ ယူကရိန်နှင့် အိန္ဒိယ သို့ outsource လုပ်ရန် စဉ်းစားမိသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာပြည်အတွက် လိုအပ်သည်ဟု ယုံကြည်သည်အတွက် ကြိုးစားပြီး ခိုင်းရသည်။
Software developer တွေ မလုပ်ချင်ဆုံးသော အရာသည် documentation ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် management, architect တို့နှင့် စကားပြောဆိုသည့်အခါ သို့မဟုတ် status report ပေးရသည့်အခါ စကားဖြင့် သို့မဟုတ် စာရေးသားခြင်းဖြင့် ကျွန်တော် ဒါတွေ ရေးပြီးပါပြီ။ ကျွန်မ ဒါတွေ လုပ်ထားပါသည်ဟု ပြောရုံ၊ ရေးသားရုံဖြင့် မလုံလောက်။(ကျွန်တော့် တပည့်များသည် ချွင်းချက် အလွန်တော်ကြသည်။😎😁 စကားချပ်။ ) နုတ်တရာ စာတလုံး ထက် ကျော်လွန်ပြီး ကိုယ် လုပ်ထားသည့် အရာကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်သည့် diagram များ၊ technical document များ လုပ်ပြီး ပြသဖို့ လိုအပ်သည်။ picture is worthathousand words. ထိုကဲ့သို့ ကိုယ်လုပ်ထားသည့် အလုပ်ကို စနစ်တကျ document လုပ်ထားပါက management team မှလည်း သင့်အပေါ် ယုံကြည်မှု ရှိလာမည်။ You need to createaWOW factor. စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအရလည်း စည်းစနစ်ရှိသော လုပ်ငန်းဆောင်တာ (process) တခုဖြစ်သည်။ white paper, requirement analysis အစရှိသည်တို့သည် ကိုယ့် ကုမ္ပဏီ ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ ဘယ်လို လုပ်သလဲဆိုတာကို ပြောပြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
software development တွင် ကျွန်တော် ယုံကြည်သည့် အရာ များထဲမှ တခုသည် documentation ဖြစ်သည်။ လူအများကို အုပ်ချုပ်၊ အတူတကွ လုပ်ကြရသည့် အခါ စနစ်သည် သာ အခါရာ ဖြစ်သည်။ လူသည် resources များ ဖြစ်သည်။ ထို resources များကို စနစ်တကျ အသုံးချရသည်။ အရာရာကို စနစ်တကျ document လုပ်ထားပါက resources များကို လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပြောင်းလဲမှု ဒဏ်ကို ခံနိုင်သည်။ (အုပ်ချုပ်သူတို့အတွက် လူသည် resource အဖြစ် သတ်မှတ်ရသော်လဲ၊ အလုပ်၏ ပြင်ပတွင် လူသည် emotional being.. စိတ်ခံစားချက် အတိုင်း ပြောဆို ဆက်ဆံ နိုင်သည်။) software developer တွေ တချိန်ကျ လျင် technical business analyst, architect, tech lead, cto, သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင် ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် ၈၀ % ခန့် ကိုယ့် အချိန်ကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်လျက် code ရေးပြီး ၂၀% ခန့် အချိန်ကို documentation, technical discussion, နှင့် team relationship အစရှိသည်ကို အာရုံ ထားနိုင်သည်။ ကိုယ်ရွေးချယ်မှုနှင့် career တိုးတက်းပြောင်းလဲ လာသည်နှင့် အမျှ ထို အချိန် အပိုင်းအခြားသည် ပြောင်းလဲသွားဖို့ ရှိသည်။
ဘာလုပ်လုပ် အများသူငှာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ထက် သာလွန် ကောင်းမွန်အောင် လုပ်တတ်ဖို့လိုသည်။ သို့မဟုတ်ပါက သာမန်လုပ်လျင် သာမန် အဆင့်တွင် ရှိနေလိမ့်မည်။ သာမန်အဆင့်မှ ဖောက်ထွက် ဖို့ လိုသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် နည်းပညာ သမားများ ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်ကို တဖြောင်းဖြောင်း ရိုက်နေသော ကျွန်တော် တို့လက် ချောင်းများတွင် ထူးခြားဆန်းကြယ်သော မှော်အတတ်များ တန်ခိုး အာနိသင်များ အပြည့်အဝ ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဦးနှောက်မှ စဉ်းစားသည့် အရာများကို လက်တွေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း ဖန်းတီးနိုင်စွမ်း ရှိကြသည်။ ထို အစွမ်းအစများကို အသုံးချ အကောင်အထည် ဖေါ်ဖို့ပဲ လိုအပ်သည်။ UNLEASH YOUR MAGIC.